Raharaha Ambohitrimanjaka “Mivadika amin`ny teny nomeny ny Fanjakana”
Antsirabe Ho tapaka ny jiro amina toerana maro
Ao anatin’ny fanatsarana famatsiana angovo ao Antsirabe dia nojerena hatry ny omaly ny hahafahan’ny orinasa Jirama manatontosa izany.
Fitsarana Anosy Hisokatra amin’ny alatsinainy ny fotoam-pitsarana
Hisokatra amin’ny alatsinainy ho avy izao ny fotoam-pitsarana voalohany eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany etsy Anosy rehefa nisy fiatoana nandritra ny fotoana maharitra noho ny hamehana ara-pahasalamana.
Voly anaty « serres » Toerana 5 no hanaovana izany eto Madagasikara
Araka ny fankatoavana nataon' ny Filankevitry ny governemanta ny 01 jolay lasa teo,
Ady amin` ny kolikoly Hokitihana ny lalàna mifehy ny PAC?
Araka ny loharanom-baovao eo anivon` ireo fiarahamonim-pirenena sasantsany misahana ny ady amin` ny kolikoly sy mikatsaka ny mangarahara, ny tamberin’andraikitra ary ny fahitsiana, dia mikasa hikitika ny lalàna mifehy ny PAC (Poles Anti-Corruption) ny governemanta kanefa dia tsy misy akory fampilazana sy fakan-kevitra ataony.
Ramatoa Christine Naolan’ny mpitandro ny filaminana…
Dr Emmanuel Rakotovahiny Nodimandry omaly teo amin’ny 81 taonany
Mitohy ny tolona. Niray hina sy niray fo amin` ny fanoherana hatramin` ny farany ny hanotorana ny tanimbariny ny mponina ao anaty kaominina efatra
voakasika tamin` ny tetikasa Tanà-Masoandro tetsy amin` ny kianja filalaovam-baolina tetsy Ambohitrimanjaka ny sabotsy lasa teo. Nisy ny tatitra momba ny fihaonana tamin` ny Antenimierandoholona sy ny solontenan` ny mponina voakasika amin`ny tetikasa. Naneho ny alehelony amin`ny tery vay manta ataon` ny fanjakana amin`ny fananganana ny “guichet unique” ny mponina any an-toerana. Tsy nanaja ny teny nomeny ny teo amin` ny fiadiadin` ny repoblika mikasika ny fihatoan` ny tetikasa Tanà-Masoandro. Tsy manaiky lembenena sy manohitra hatramin`ny farany ny mponina amin`ny fanotafana ny tanimbarin` izy ireo. Miato daholo ny asa rehetra mandrampahavita ny fifampiresahana saingy mahagaga dia telo andro taorian` izay natsangana ny “guichet unique” izay miresaka ny onitra omena an` ireo voakasika amin` ny Tana`-Masoandro. “Mariky ny tsy fanajàna ny teny nomen` ireo tale eo anivon` ny fiadiadin` ny Repoblika mikasika ny fiatonana ny tetikasa ny fananganana ny birao manokana misahana ny Tanà-Masoandro etsy Village Voara”, hoy ny CRAD-OI, fikambanana mpiaro ny zon` ny maha-olona. Nanamafy ihany koa i Randrianaivo Eric, solontenan` ny mponina Ambohitrimanjaka, fa tsy tokony hiroso amin` izany satria mbola nisy ny dingana natao teo anivon` ny Antenimierandoholona izay tapaka fa hisy taratasy alefa mivantana any amin` ny Filoham-pirenena. Tsy hanaikiy lembenana ny mponina eny Ambohitrimanjaka sy ny manodidina ka hanamafisana ny tolona dia hajoro ara-dalàna ny vondrombahoaka manohitra ny fanotofana ny tanimbary eny Ambohitrimanjaka. Dingana manaraka moa ny hamolavolana fitarainana ary hanomana fihaonana mivantana amin` ny filoham-pirenena.